Cayaartooyda Spain Oo Digniino Ka Helaya Garsoorayaal Khubarro Ah – Garsoore Sports
Cayaartooyda Spain Oo…
Iyadoo maalmo ay ka harsanyihiin billowga Tartanka Horyaaladda Yurub, dhammaan wadamada ka qeyb galaya waxay talo kahelayaan garsoorayaasha dalkooda si ay ugu digaan uguna shareaxaan cayaartoyda sida garsoorku noqon doono inta uu socdo tartanka.
Muuqaal caawiyaha garsoore ee VAR ayaa goob joog ka noqon doona cayaar kasta waxaana jiri doona hawlwade diiradda saaraya keliya Offside-ka marka lagasoo tago guud ahaan VAR-ka sida wargayska Isbaanishka ah ee Marca uu sharraxayo.
“453 kulan, waxaa jiray 139 sixitaan oo ay sameysay VAR, waxaana kulankiiba la saxay 3.25 qalad. Celceliska wuxuu kudhowaad yahay 0.25 waxqabad ah cayaar kasta, celcelis ahaan labo daqiiqo sixitaankiiba. Taasi waxay la micno tahay inaysan saameyn ku yeelan qulqulka ciyaaraha, ” Ayuu yiri Roberto Rosetti oo ah garsoore rugcaddaa ah.
Garsoorihii hore ee u dhashay wadanka Spain Velasco Carballo ayaa uga digay cayaartooyda dalkiisa inay ka taxadaraan kubbaddaha gacanta ah marka ay daafacanayaan isla markaana aysan dhammaan kubbadaha gacanta lagu taabto xilliyada weerarka uu socdo uu haddii uu gool ku yimaado la diidi doono.
“Ujeeddadu waa in la ilaaliyo ciyaarta iyo nabadgelyada dadka. Ma dooneyno inaan aqbalno nooc kasta oo rabshado ah. Istuurista, buuqa iyo astaamaha xadgudubka ah ee loo jeedinayo garsoorayaasha ayaa la isku ciqaabi doonaa” ayuu Rosetti carabka ku adkeeyay.